व्यपार / व्यवसाय Archives - Page 34 of 51 - Purbeli News
काठमाडौं / बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुन तोलामा एक सय रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला ५७ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । सुन हिजो प्रतितोला ५७ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदी पनि तोलामा पाँच रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला सात सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ । चाँदी हिजो प्रतितोला सात सय १० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी ...
काठमाडौं / बजारमा आज पनि सुनचाँदीको मूल्य स्थिर छ । आज पनि सुन प्रतितोला ५७ हजार आठ सय रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको छ । सुन हिजो पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि स्थिर छ । चाँदी पनि चाँदी प्रतितोला सात सय १० रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । Purbeli TV
सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीमा घट्यो, कसमा कति ?
काठमाडौं / नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन तोलामा दुई सय रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला ५७ हजार आठ सय रुपैयाँ पुगेको छ । सुन हिजो प्रतितोला ५७ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनको मूल्य बढ्दा आज चाँदीको मूल्य भने घटेको छ । चाँदी आज तोलामा पाँच रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला सातसय १० रुपैयाँ कायम भएको छ । चा...
हेर्नेुहोस् आजदेखी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र एलपी ग्यासको भाउ कति भयो ?
काठमाडौं / नेपाल आयल निगमले आजदेखी लागु हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र एलपी ग्यासको भाउ बढाएको छ । पेट्रोलमा लिटरको १ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा लिटरको ३ रुपैयाँ तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ भाउ बढेको निगमले जनाएको छ ।भाउ बढेपछि अब पेट्रोल लिटरको १ सय १२ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल ९८ रुपैयाँ तथा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य १४ सय ...
काठमाडौं / नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य यथावत छ भने चाँदीको मूल्य भने घटेको छ । सुन आज पनि प्रतितोला ५७ हजार दुई सय रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको छ । सुन हिजो पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । तर, चाँदीको मूल्य भने आज तोलामा १० रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला सात सय १० रुपैयाँमा कायम भएको छ । चाँदी हिजो प्रतितोला सात सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल...
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कति छ आज ?
काठमाडौं / बजारमा आज फेरि सुनको मूल्य बढेको छ । आज सुन तोलामा दुई सय रुपैयाँ बढ्दै प्रतिताला ५७ हजार दुई सय रुपैयाँ पुगेको छ । सुन हिजो प्रतितोला ५७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनको मूल्य बढेपनि आज चाँदीको मूल्य भने यथावत छ । चाँदी आज पनि प्रतितोला सात सय २० रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । Purbe...
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा झर्यो ? हेर्नुहोस
काठमडौं / नेपाली बजारमा आज फेरि सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन तोलामा तीन सय रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला ५७ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । सुन हिजो प्रतितोला ५७ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा पाँच रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला सात सय २० रुपैयाँमा झरेको छ । चाँदी हिजो प्रतितोला सात सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएकाक...
फेरि बढ्याे सुनकाे मुल्य । आज कति छ सुन चाँदीकाे भाउ ?
काठमडौं / नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा दुई सय रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सुन हिजो प्रतितोला ५६ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनको मूल्य बढेपनि आज चाँदीको मूल्य भने यथावत छ । आज पनि चाँदी प्रतितोला सात सय २५ रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । Purbeli TV ...